Ny hevitry ny kiran'ny Taratra Knight of Wands | Famakiana Tarot - Ny Dikan'ny Karatra Tarot
Ny dikan'ny kiran'ny Taratra Knight of Wands
Ny Knight of Wands Tarot Lisitry ny atiny
Ny Knight of Wands mahitsy
Nivadika ilay Knight of wands
Tandindon'ny nomeraon'ny Knight of Wands
Hiverina any amin'ny Suit of Wands
Miverina any amin'ny Arcana Minora
Miverina amin'ny dikan'ny Tarot Card rehetra
Alefaso ny moterao!
Ny Knight of Wands dia eo AFO rehefa niampanga teny amin'ny lemaka karakaina midadasika izy.
Ara-bakiteny: Jereo fotsiny ny volon'ondry volon'ondry mirehitra eo amin'ny fiarovan-doha sy ny lelafo mitifitra avy amin'ny sandriny itananany ny kitron-tsoavaliny.
karazana biby inona ny capricorn
Ny an'ny Knight MAVO tabard dia maneho ny fahaizan-tsaina sy ny haingam-pandeha rivotra . Voaravaka salamanders izy io, maneho ny heriny mirehitra.
Toy ny rivotra lafiny amin'ny AFO , ity karatra ity dia manambatra ny hery sy ny hafainganana.
Mameno anao amin'ny fahitana sy ny fandraisana andraikitra izany, nefa koa angovo tsy mampino ary fifikirana mifikitra.
Lehilahy manao asa fitoriana ity.
Ao amin'ny Knight of Wands, ny lanitra mazava etsy ambony dia mampiseho fahazavana sy fahazoana. Mazava ny sakana amin'ny tany eto ambany. Mandeha ny rafitra rehetra!
ny soavaly dia tandindona ny fahefany. Izy io dia mandroso amin'ny herin'ny finiavana mitovy amin'ny an'ny mpitaingina azy.
Fanandroana , cancer SY Leo mitambatra mba hameno ny Knight amin'ny fahitana sy ny tanjaka.
Mety ho ny fahitana ara-panahy an'ny Charioteer ao amin'ny Major Arcana .
Ireo piramida telo avy lavitra dia mampiseho fa ny fikatsahany dia mety ho ara-panahy.
Amin'ny maha mpitondra ny fanjakan'ny biby , ny fitaoman'i Leo dia tsy ny fahefana sy ny finiavana ihany.
Ny mpitondra dia tokony hanome aingam-panahy ny hafa koa. Noho izany dia mila charisma izy.
Oh, ary ny Knight of Wands dia tena mamirapiratra amin'ny charisma!
Raha miaro azy amin'ireo singa ny fiadiany, dia fahitana ihany koa izany, mamirapiratra mamirapiratra amin'ny masoandro. Ny visor misokatra dia manambara ny tarehin'ny Knight, izay ny endriny feno tanjona dia saika areti-mifindra.
Ity dia olona mahalala izay tadiaviny ary iza no handeha misy halavany hahazoana izany.
Ny tongony fohy amin'ny tànany ankavanana dia maneho ny mahavelom-bolo azy sy ny fahaizany mamorona. Tsia, tsy dia fitaovam-piadiana izany, fa araka ny asehon'ny visor misokatra, ity Knight ity dia tsy manao iraka ady.
Hevitry ny Taratra Taratra Taratra Tarika mahitsy
Tsy afaka nahaliana ny fiainana izao. Manana fipoahana ianao!
Rehefa miseho mijoro amin'ny famakiana tarot ny kard Knight of Wands tarot dia famantarana fa madio ny làlana, fantatrao tsara ny lalana alehanao ary azonao atokisana tanteraka ny instinctso.
Mbola tsara kokoa aza, dia mahazo hery ianao. Ny olon-drehetra dia afaka mahita fa manana izay ilaina ianao raha mandeha ny halavirana.
Ny olana iray izay tsy nahagaga anao nandritra ny fotoana elaela dia izao tonga saina tonga lafatra izao. Io fanazavana vaovao hita io dia manome hery anao indray, manome anao antony manosika araka ny tokony ho izy hanatanterahana ny tanjonao.
Angamba fahitana tampoka na fisehoan-javatra tampoka no mandrisika anao handray fanapahan-kevitra manova fiainana. Tonga aminao ny fotoana vaovao, na mahita fotoana tsy hitanao taloha. Na izany na tsy izany, tonga ny fotoana fialana amin'ny vahoaka.
Raha mbola mijery ny sori-dalanay ianao ary mameno ny zavatra mety rehetra dia tsara ny mandeha.
Ary tsy misy fotoana laniana.
Raha nanana fanontaniana momba ny lalanao ara-panahy ianao, dia miaraka ireo sombin'ny piozila. Na afaka mahita ny sary iray manontolo ianao na tsia, dia tsara ny manolo-tena tanteraka amin'ny lalana nofidinao.
Ankoatr'izay, tsy ho mankaleo ve raha tsy misy mistery sisa hovahanao?
Raha misolo tena olona ny karatra Knight of Wands dia olona aleony mihetsika mihoatra ny misaina. Indraindray, midika izany fa mikomy izy noho ny mahasoa azy.
Etsy ankilany, miha mifanaraka amin'ny toetrany izy - ary nihatsara izy ireo tamin'ny fitarihana azy amin'ny làlana tsara.
Ny Knight of Wands dia marani-tsaina ary feno famoronana. Izy dia mahatsikaiky mahatsikaiky sy toetra mahafinaritra be fitiavana.
Raha mpitovo ianao ary mitady, dia hitanao tokoa ny mojo anao! Fantatrao tsara izay holazaina izay hahatonga ny olon-kafa manintona handeha hitarika anao.
Tsara ho an'ny karma anao, fa tsara toetra loatra ianao ka tsy te ho faly rehefa mijery ny mpifaninana aminao mahazo namana.
Raha olona mahaliana anao ity dia misy vaovao tsara. Ny Knight of Wands dia mahitsy loatra ka tsy afaka manao fampisehoana mahavariana izay hanelingelina anao amin'ny lafiny maiziny.
Izay hitanao dia azonao.
Knight of Wands Niverina tamin'ny dikany Tarot
Ny hafanam-po manapaka ny hatoka izay hihazakazahan'ny Knight of Wands mankany amin'ny tanjony dia mety hahafaly - raha mbola mandeha amin'ny lalana marina izy ary tsy misy lavaka eny an-dalana.
Aza misalasala manampy an'izay sarin-teny hafa tsy mahafinaritra: fandrika hafainganam-pandeha, taratra radiatera, fitohanan'ny fifamoivoizana sns.
Izay rehetra mandrahona ny filàny haingam-pandeha dia afaka mamadika ny Knight of Wands ho Knight of Whines.
Matetika, ny azy no diso. Ny fangaroharo tena mifangaro amin'ny rivotra SY AFO mazàna mampitebiteby sy mikorontana.
Indraindray, izy dia ho maika an-jambany amin'ny zavatra tsy manelingelina ny mieritreritra ny vokany. Ohatra, rehefa mafana ny fifamaliana dia mety miteny izy na manao zavatra mety hanimba ny fisakaizana, ny fifandraisana - na ny asa.
Raha ianao ity dia tsara kokoa ny tsy miteny na inona na inona mihitsy mandra-pitonianao. Na dia marina aza ny anao. Ny 'miala tsiny' dia mety tsy afaka manamboatra ny korontana azonao noforonina. Raha olon-kafa ity dia mety efa manenina amin'ny zavatra nataony izy.
Ny karatra tarot Knight of Wands nivadika dia tsy tsara amin'ny fiatrehana fanoherana na fanelingelenana. Mampifangaro azy izy ireo.
Ny fahalalany tokana dia mamela azy hanao zavatra mahatalanjona rehefa mandeha araka ny kasaina ny zava-drehetra. Saingy ny ati-dohany dia tsy afaka mamehy ny tenany amin'ny hevitra hoe tsy atao foana ny zavatra. Na ny fahasarotana kely aza dia mety hahatonga azy tsy ho kivy na ho tezitra be.
Mety hanoratra fihantsiana valifaty mihitsy aza izy ao amin'ny bilaoginy!
Ny toetran'ny Knight izay tsy milamina dia mety hitarika azy handrisika korontana ihany koa, mba hanaporofoany amin'ny hafa fa toy ny zatovo mankaleo.
Raha afaka mampita ity angovo ity amin'ny fomba manorina ianao dia azonao atao ny manome aingam-panahy azy hanao zavatra lehibe. Fa raha tsy mandeha izany dia mety mila mametraka fetra mafy ianao.
Mpifanandrina mampatahotra izy rehefa mifanatrika. Fa matetika izy feno ny tenany ka tsy sarotra be ny mandondona azy amin'ny soavaliny.
Taratasy metaphysical The Knight of Wands Tarot:
singa : AFO
Famantarana Zodiac : Aries , Leo & Sagittarius
Kristaly fanasitranana : Carnelian
Ny karatra Knight of Wands & Tarot Numerology
Ny Knights rehetra dia ampifandraisina amin'ny isa 6. Kabbalistically, ny enina dia mifanitsy amin'ny toetra manome hery manome aina sy manome fiainana ny masoandro.
Amin'ny nentim-paharazana Isa, 6 dia mifandray amin'i Venus mafana fo sy ny herin'ny fitiavana. Ireo angovo ireo dia mitambatra amin'ity karatra ity hanehoana ny antony manosika sy fiaretana hahavita zavatra lehibe.
Mianara bebe kokoa momba ny zavakanto masin'ny divay an'ny fandinihana ny . Ampiasao ny Calculator isa mahita izay Làlan'ny fiainana , fanahinao manontolo , TOETRA , mifanentana SY Isa momba ny asa dia sy ny fomba ahafahan'izy ireo manampy amin'ny fanatsarana ny faritra rehetra amin'ny fiainanao!
leo lehilahy pisces vehivavy eo am-pandriana
maninona ny homamiadana no voasarika amin'ny libra
lehilahy sagittarius tia vehivavy sagittarius